Nagarik News - ३१ औंमा बल्ल रिलिज!
होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / ३१ औंमा बल्ल रिलिज!
३१ औंमा बल्ल रिलिज!	05 Jul 2013 | 09:44am शुक्रबार २१ असार, २०७०
काठमाडौं – फिल्म बनाएपछि देशभर चलाउने र दर्शक प्रतिक्रिया बटुल्ने लक्ष्य सबै निर्देशकको हुन्छ। तर प्रितम गुरुङ अपवादमा पर्छन्, जसले ३० वटा फिल्म निर्देशन गरिसक्दा पनि देशव्यापी प्रदर्शनको मौका पाएका थिएनन्। उनको निर्देशन रहेको ३१ औं फिल्म 'जीवनलीला' चाहिँ शुक्रबारबाट राजधानीमा चल्दैछ। यो नै उनको पहिलो फिल्म हो, जसले देशव्यापी प्रदर्शनको मौका पाउँदैछ। २०५८ सालदेखि फिल्म निर्देशनमा सक्रिय गुरुङले २६ वटा गुरुङ, चार मगर र एक नेपाली गरी ३१ वटा फिल्म निर्देशन गरिसकेका छन्। तर 'जीवनलीला' उनको पहिलो फिल्म हो, जुन राजधानीका १२–१३ वटा हलमा एकसाथ रिलिज हुँदैछ। बिना प्रचारप्रसार अचानक फिल्म रिलिज भएकोले उनी खुसी हुने वा दुःखी, दोधारमा छन्। 'बुधबारमात्र फिल्म रिलिज हुँदैछ भन्ने थाहा भो। दुई दिनमा के गर्न सकिन्छ? हलवालाको भरोसामा छाडिदिएका छौं,' उनले भने।अरु कुनै फिल्म रिलिज नहुने भएपछि 'जीवनलीला' फिल्म 'सुट'सँगै शुक्रबारबाट राजधानीमा रिलिज हुन लागेका हो। २० लाख लगानीमा बनेको फिल्म काठमाडौंबाहिर भने दुई वर्षअघि नै प्रदर्शनमा आइसकेको छ। दुई वर्षअघिको तमु ल्होसारका दिन प्रदर्शनमा आएको फिल्मले अपेक्षा अनुरुप व्यापार गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। काठमाडौंमा राम्रोसँग प्रदर्शन गरेर पैसा उठाउने मनसाय निर्माण टोलीको थियो। तर, काठमाडौमा पनि अचानक फिल्म रिलिज गर्नुपरेपछि दर्शकलाई हलसम्म कसरी पुर्यामउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। 'एक हप्ताअगाडि थाहा भएको भए पनि राम्रै प्रचारप्रसार गर्थ्यौं। कथा राम्रो छ र गीत पनि राम्रा छन्। दर्शक निराश हुनुुहुन्थेन,' गुरुङले भने। 'जीवनलीला'को लगानी उठाउने अनिश्चित रहे पनि उनी आफूले विगतमा बनाएका सबै फिल्मले लगानी सुरक्षित गरेको दावी गर्छन्। 'मैले आफ्नै निर्माण तथा निर्देशनमा १८ वटा फिल्म बनाइसकेको छु र हरेक फिल्मले केही न केही नाफा कमाएर दिएका छन्,' उनले सुनाए। पोखरा, बागलुङ र छेउछाउका हलबाट प्रदर्शन गरेर केही पैसा आउने भए पनि विदेशमा हुने प्रदर्शनी र काठमाडौंमा हुने च्यारिटीले फिल्मको लगानी सुरक्षित हुँदै आएको उनको अनुभव छ।तीन दर्जन फिल्ममा निर्देशकको रुपमा प्राप्त गरेको अनुभव 'जीवनलीला'मा पोखेको उनी बताउँछन्। फिल्ममा उति साह्रो चिनिएका कलाकार नभए पनि दर्शकले नेपाली मन र नेपालीपनको अनुभूत गर्ने उनको दावी छ। विनय लामा, गिरिप्रसाद पुन, सोनिया केसी आदि कलाकारको अभिनय गरेको फिल्मलाई पूर्णबहादुर राना र किरण चित्रकार मिलेर निर्माण गरेका हुन्। « 'बिहेमा ड्रामा गर्ने सोच छैन'
'ध्यानी' झरना »